Mhinduro dzinokurumidza kumibvunzo yako inowanzobvunzwa yeSeO
Kuita kuti nzvimbo yako ionekwe paSERP, iwe unofanirwa kuziva zvishoma pane kungotsvaga tsanangudzo yezwi yekutsvaga uye kuti ingakanganisa sei nzvimbo yako. Kuti uwane kukunda kushandiswa kwemushandirapamwe kana kutarisa basa reSeO yako nyanzvi, unoda kuwana ruzivo rwakadzika pamusoro pewebsite kugadzirisa mazano uye nzira. Saka ngatitaurire pamusoro pekukosha kwe SEO zvinhu zvakawanda zvevatangadzi vane mibvunzo pamusoro penzira yekuvandudzwa kwewebsite asi musingazivi kuti ndiani anokumbira kutsanangurwa.
TOP inowanzobvunzwa mibvunzo pamusoro pe SEO
Ndechipi musiyano pakati pekutsvaga uye kubhadhara?
Pais kana zvisingagoneki mitsva yekutsvaga ndeaya inowanikwa pa TOP yeSERP peji uye ine chiratidzo "Zviviso. "Mune zvimwe zviitiko, mhinduro idzi dzinogona kuonekwawo kune rumwe rutivi rweSERP peji. Aya ndiwo mazita avashambadziri vanobhadhara kuti vaone pane TOP yezvinjini dzakasiyana-siyana dzemibvunzo yakakodzera yomudhi. Kuti usvike pakutsvaga kwakabhadharwa, haufaniri kutungamira kushandira. Zvese zvaunoda ndezvekubhadhara kumunhu mumwe nomumwe pakutsvaga pachikwata chako. Rudzi urwu rwekubhadhara chirongwa chinonzi kubhadhara-per-click advertising uye inoshandiswa kukwevera vashanyi vatsva kubva kutsvaga uye kusimudzira kudhinda-kupfuura nepakati.
Kutsvaga kwemuviri kana kusingabhadharwi kunoreva mitezo yehupenyu inowanikwa mumitsva yekutsvaga kuburikidza nehupamhi hwehuwandu hwewebhu. Nzvimbo yewebhu inowanikwa pa TOP yekutsvaga kwehupenyu inogona kusiyaniswa nehunoenderana, hutano, uye SEO-hukama. A TOP nhamba yewebsite inofanira kuve yakagadzirwa maererano nezvose zvinotsvaga injini. Nokutungamira muhupenyu hwekutsvaga, unosimudza mikana yako yekuvandudza mararamiro ako nekucherechedza hutsika hunozoshandura kuitengesa.
Ndingabhadhara zvakadini mabasa eSeO?
Kutsvaga injini yekugadziriswa kwehutengo mutengo kunogona kusiyanisa zvinoshamisa zvichienderana nerudzi rwebhizimisi rako, niche yako yemusika uye ukuru hwekugadzirisa (nzvimbo, nyika, pasi rose). Uyezve, mutengo unobva pane unyanzvi hwekugadzirisa hurumende simba uye mukurumbira. Kana iri nguva refu inogara ichizivikanwa munyika inoshambadzira yehudhi yekutengeserana, saka zvichida mari yebasa ravo ichave yakakwirira kudarika mutengo wemari wepamusika. Zvisinei, mari yako yose ichabhadharwa mu spades. Ndicho chikonzero iwe haufaniri kunge usina chokwadi nehuwandu hwekugadzirisa mararamiro emutengo.
Usaputsika kumakambani anopa SEO pamatengo asingakwanisi. Muzviitiko zvakawanda, pane kusabatsirana kwekuita uye kusvibisa shure kwayo. Kazhinji, makambani aya anoshandisa mashizha e-black-hat SEO kuti awane mhinduro inokurumidza. Zvisinei, zvinogona kutungamirira kune zvikwereti zveGoogle uye zvigaro zvishoma.
Kana ndangotanga SEO, ndinofanira kumirira zvakadini kuti ndiongorore zvibereko zvakanaka?
SEO inzira inopedza nguva inoda nguva nekuedza. Haikwanisi kushandiswa kweusiku. Zvinotora kubva pamasvondo matanhatu kusvika kuchitanhatu kuti zviitike mazano ese eEO anokosha uye mwedzi yakawanda mushure mekugadziriswa kwezvinhu zvose zvakatsaurirwa pakugadzirisa kushandiswa. Tsvaga injini dzekutsvaga dzinoda nguva yekutarisa uye kurongedza iwe webhusaiti yako shanduko kuti uwane nzvimbo yako panzvimbo yakakwirira paSERP. Zvichienderana nechitengesheni chako chemusika, uwandu hwewebsite nehutano hwekugadzirisa, zvinotora kubva pamwedzi we6 kusvika ku 9 kutanga kutarisa mhinduro dzekutanga dze SEO Source .